Shiinaha Runjin © Krunt ™ -EX800 Khadka Soo-saarista iyo Kala-goynta ee Soo-saarista iyo Warshadda Jalaatada | Runchen
Runjin © Krunt ™ -EX800 Khadka Qalalaasaha iyo Kala-goynta Ice cream
Runchen © Expro ™ -EX800 waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo jalaatada nooca extrusion-ka iyo jalaatada nooca buuxinta, sidoo kale waxaa loo isticmaali jiray qurxinta iyo adkeynta alaabada jalaatada. Noocyada kaladuwan ee alaabada jalaatada waxaa lagu soo saari karaa qalab caawiya.
Noocyada alaabta ee la soo saari karo:
- Badeecad lagu dhejiyay rodol - badeecad fiiqan - jalaato koor / koob - jeex - baloog - rooti - keeg yar
Halbeeg Runchen © Expro ™ -EX800 khadka jalaatada ee jalaatada wuxuu ka kooban yahay nidaamka gudbinta saxaarada wax soo noqnoqoshada iyo kaydinta dhaqsiyaha badan ee lagu keydsho. Meesha laga soo galo / ka bixida badeecada ayaa lagu dhajiyay wejiga hore ee keydinta qabow ee isla markiiba waxayna ku xiran tahay meheradda shaqada, iyadoo sameysa nidaam gudbinta wareega ah Jaangooyo istaandar caadi ah ayaa lagu rakibay sagxadda shaqada si loo soo saaro, loo buuxiyo loona qurxiyo kareemada barafka. Kaydinta degdegga ah ee lagu keydsho gudaha, silsiladda gudbinta waxay ku wareegsan tahay laba nooc oo looxyo bir bir ah oo isku mid ah.
Nidaamka shaqo ee ugu horreeya, khadadka waxsoosaarka ayaa alaabada ceyriinka ah ee kiriimyada barafka ku shuba saxannada wax soo saarka (sida badeecada usha ku xiran, badeecada jeexjeexa ama keega yar), ama waxay ku buuxisaa alaabta ceyriinka ah ee kareemada barafka ku jirta koonyada horay loo qaybiyey . Qaybaha hawlgalka ee kala duwan ayaa loo isticmaalaa alaabooyin kala duwan sida qalabka ul-ku-xidhka, qalabka qaybinta buskudka, aaladda qaybinaysa xanjada, buuxinta koorta u eg qaababka, jalaatada dusha sare lagu qurxiyey, karamell, casiirka, macaanka ama miraha la qalajiyey Kadib, baakidhka leh alaabtu waxay mari doonaan tunnel-ka dhaxanta degdega ah waxaana lagu qaboojiyaa hawo qabow wareegaya. Ka dib marka waxyaabaha jalaatada ay barafoobaan, gacanta farsamada ayaa alaabada ka qaadi doonta saxanka oo ku qoyn doonta shukulaatada kadibna soo xirxiraya alaabada
Awoodda ugu weyn
Nidaamka silsiladda wadista silsiladda iyo isha tamarta ee dhammaan aaladaha ku yaal meheradda shaqada ayaa ku jira tunnel qabow deg deg ah. Shaagagga wadista ee nidaamka gudbinta silsiladda iyo mashiinka wadista ugu weyn ee ka hooseeya meheradda shaqada ayaa si toos ah ugu xidhan awoodda weyn.
Wareegyada saldhigga ayaa lagu rakibay meheradda shaqada si loo qalabeeyo qaybo kala duwan oo shaqeynaya si loo soo saaro alaabooyin gaar ah. Wareegyadan saldhigga waxaa loogu talagalay inay is weydaarsadaan midba midka kale si uu u soo saaro noocyada nooca wax-soo-saarka ama buuxinta. Dhammaan dusha sare iyo qaybaha madalku waxay ka samaysan yihiin bir bir ah ama walxo daxal ah.
Tunnel qabow degdeg ah
Tunnelka dhaxanta degdega ah ee Runchen © Expro ™ -EX800 wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo bakhaarro madax-bannaan oo horay loo sii diyaariyay. Uumeeye iyo taageere xawaare sare ku socda ayaa la dhigaa dhinaca nidaamka gudbinta silsiladda. Kaydinta degdegga ah ee lagu keydsho gudaha, silsiladda gudbinta waxay ku wareegsan tahay birta birta ah ee birta ah ee tareenka laba-geesoodka ah. Dhamaan silsiladaha taageera silsiladaha, silsiladaha silsiladaha iyo looxyada waxaa loogu talagalay inay fududaato nadiifinta iyo dayactirka. Inta udhaxeysa qeybta silsiladda iyo marawaxada waa marin marin dayactir ah. Nidaamka xiisadda ee loo adeegsado hagaajinta silsiladda gudbinta ayaa si fiican u tixgelisa kala-duwanaanta heerkulka ee tunnel qabow deg deg ah. Gudiga keydinta ee tunnel-ka dhaxanta degdega ah wuxuu ka sameysan yahay bir bir bir ah oo leh PU gudaha. Qeybta hoose ee keydinta waxaa la siiyaa godka bullaacadaha.
Dhammaan howlaha kala sooc la'aanta ah oo ay ku jiraan qaybta awoodda, buuxinta shaqada iyo qurxinta dusha sare
shaqada jalaatada dhammaantood waxaa lagu xakameeyaa PLC oo ku yaal guddiga kantaroolka dhexe. Dhammaan xogta wax soo saarka waa la soo ururin karaa, la maamuli karaa oo horay loogu hagaajin karaa guddiga xakamaynta. Marka qalab kale ay ku xiran yihiin kombiyuutarka martida loo yahay, qalabka waxaa lagu xakameyn karaa barnaamijyo kala duwan.
Heerka Runchen © Expro ™ -EX800 waxay khusaysaa uumi-baxa qaboojiyaha ammonia. Iyada oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah, nidaamku wuxuu kaloo adeegsan karaa Freon evaporator.
Runchen © Expro ™ -EX800 Qalabka gudbinta badeecada waxaa si gaar ah loogu talagalay gudbinta alaabada usha ku xiran. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qoydo badeecadaha usha ku xiran ka dib adkaynta adkaanta ee shukulaatada. Qalabka waxaa lagu qalabeeyay 185 gacmood oo farsamo ah iyo taangiga shukulaatada dhaqaaqa oo dhaqaaqa iyo shukulaatada khaaska ah ee wareega.
Nooca alaabta Buskudqaybinta Toosankabasho Ushafurid Joogtogoynta Xabkahaqaybinta
Usha-gashansheyga √ √ √ √
Sandwichsheyga √ √ √
Jeexsheyga √ √
Nooca alaabta Kondhiqaybinta Shukulaatadabuufinta Go'aanbuuxin Qalin buuxinta Sarequrxin
Koob wareeg ah √ √ √
Kondhi √ √ √ √
Keeg yar √ √
Awood (hal saac saacaddii)
Jalaato ay ku dhegan tahay:
Keega Jalaatada: wax dabool ah ma jiro
Ka jooji jalaatada
Awooddu waxay ku saleysan tahay alaabada jalaatada caadiga ah leh qaaciddada soo socota iyo heerkulka uumi baxa ee -45 ℃.
Dufanka aan dufan lahayncaano Sonkor (bakooradsonkor) Plasm gulukoos Waxyaabaha hoosaad Mawduuca isku-darka Biyaha Wadarta
Awoodda alaabada jeexjeexa waxay ku saleysan tahay alaabada caadiga ah oo leh dhumucda ugu badan ee 25 mm.
Awoodda koombada cajaladdu ku xiran tahay waxay ku saleysan tahay alaabooyinka caadiga ah ee dhexroorkoodu ugu badan yahay 60 mm.
Madal shaqo Kaydinta
Miisaanka saafiga ah kg 2,000 7,200 4,200
Miisaanka culus 3,000 9,500 6,600
Dhexroor ugu badnaan m 5.41 × 1.35 × 2.7 9.1 × 2.42 × 2.9 7.71 × 2.42 × 2.9
Hore: Runjin © Krunt ™ -N2000 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Xiga: Runjin © Krunt ™ -RM35 Mashiinka Jalaatada